>ပေါင်မုန်.နဲ.ထောက်ပတ်ပြဿနာလောက်ရှိရင်အာဏာရှင်ကိုစတင်တော်လှန်လို.ရပြီ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	>ပေါင်မုန်.နဲ.ထောက်ပတ်ပြဿနာလောက်ရှိရင်အာဏာရှင်ကိုစတင်တော်လှန်လို.ရပြီ	January 23, 2011
မောင်ရွှေငှက်တင်ပြထားသည် ဘင်းအလီကအတိုက်အခံအဖွဲ.ကိုလုံးဝပွတ်တိုက်ဖျက်စီးလိုက်တာဟာမဟာအမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်၊စနစ်တကျအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီရှိနေခြင်း သည်အာဏာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံး(အချစ်ဆုံး)မိတ်ဆွေးဖြစ်တယ်၊ပါတီအတုတွေထူထောင်လို.ရတယ်၊တရားဝင်ပါတီတွေကိုအနှောင့်အယှ က်ပေးလို.ရတယ်၊သူတို.အချင်းအချင်းရန်တိုက်ကြအောင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်လို.ရတယ်၊အဓိကကတော့၊သူတို.ရှိနေဖို.ပဲ၊သူတို.ရှိနေလို.ရှိရင် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကကြည့်လို.ကောင်းတာပေါ့ဗျား၊ခင်ဗျားဘက်ကိုသူတို.ဘယ်တော့မှမရပ်တည်ဘူးပြောလို.ရတာပေါ့ဗျား၊ဝေဖန်သမားတွေကလည်း ပြောလာမယ်၊အဲဒါကြောင့်၊မအောင်မြင်တာ၊သူတို.မှားတာစတာတွေပေါ့၊အတိုက်အခံပါတီကို ကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်မည်ဆိုရင် ပြသူလူထု၏အတိဒုက္ခ၊ဒေါသတွေကိုသက်သာသွားအောင်နည်းလမ်းဖွင့်ထားသည့်သဘောပေါ့ဗျား၊(သန်းရွှေအာဏာရှင်နဲ.အန်အေလ်ဒီပါတီကဒီ အတိုင်သွားနေပြီးတကယ်စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီလိုလာသူများ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုအနှစ်(၁၀၀)အထိထောင်ချထားလို.ပေါ့ဗျား)၊တူးနီ ရှားတွင်ပြည်သူတွေက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာကလွဲရင်ဒါကိုရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူး၊(ဒါကြောင့်၊အဏာရှင်ပြုတ်ပြီးအောင်မြင်တာပေါ့) ဖိနှိပ်ချုပ်ချက်ပါ၊ဒါပေမဲ့၊အလွန်အကျွံမလုပ်နဲ.
ဆလိုဗိုဒန်မီလိုဆဲဗစ်ကို ဖြုတ်ချခဲ့သောကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကပြောဖူးတယ်၊အကောင်းဆုံးအာဏာရှင်ဆိုတာအမြဲတမ်းလိုလိုအ လျော.အတင်းလုပ်တတ်တယ်သတဲ့၊လိမ်မာသောအာဏာရှင်ဟူသည်သူတို.အသက်ရှင်နိုင်ရေးကိုထိခိုက်စေမည့်အာဏာလွှဲပြောင်းမှုမလုပ်ဘူး၊အ ရာရာတိုင်းမှာစေ့စပ်ဆွေးနွေးလို.ရတယ်တဲ့၊
စင်္ကာပူနိုင်ငံလိုမျိုးဖြစ်ဖို.မကြိုးစားနဲ. အာဏာရှင်များအတွက်စီးပွားရေးဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတည်ကိုသာလုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အရည်းအချင်းနဲ.ဆိုရင် စနစ်အားလုံးပျက်စီး၍သွားလို.မရ ပါဘူး၊ဘင်းအလီကစီးပွားရေးကို ၅ ရာခိုင်းနှုန်းတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်၊ဒါပေမဲ့၊သူ.နိုင်ငံတူးနီရှားကအနောက်တိုင်းသားများအပန်းဖြေ ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအာရှအာဏာပိုင်ခေါင်းဆောင်များကအဲဒီလိုမလုပ်ဘူး၊အနောက်တိုင်းများအပန်းဖြေသည့်နေရာအဖြစ်မခံဘူး၊ထို.ကြောင့်၊တူးနီ ရှားမှာကုန်ကျစရိတ်ကထိုးတက်သွားပြီးအာရှာနိုင်ငံတွေမှာပုံမှန်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်၊အဲဒီလိုကုန်ဈေးနှုန်းထိုးတက်လာရင်ခင်ဗျာအရည်းအချင်းက ဖိနှိပ်တစ်ခုတည်းနဲ.ဆိုရင်သွားပြီးပေါ့၊(မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ဒီမိုကရေစီလိုဟာမျိုးပေါ့)
ပြည်သူများကိုအလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်ပထွက်အောင်လုပ်ပါ၊ခင်ဗျားကိုခေါင်းကိုက်သွားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်စာတတ်၊ပညာတတ်လူငယ် များအန္တရာယ်မှကာကွယ်နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ဟူဂိုချာဗက်၊နဲ.မူဘာရက်တို.ကဒီအချက်ကိုအသုံးချနေတယ်၊ဗီနီးဆူလားနှင့်အီ ဂျစ်နိုင်ငံသားများကသူတို.နေရပ်ကိုစွန်.ခွာနေကြပါတယ်၊(ဗမာနိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့ဗျား)၊အဲဒီလူငယ်တွေကအမေရိကန်၊ဥပရောပ၊အာရပ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးရရှိသည့်ဝင်ငွေတွေကိုသူတို.မိသားစုးဆီပေးပို.နိုင်တာပေါ့၊(အာဏာရှင်တွေလည်းစားရတာပေါ့ဗျား)၊
ဘင်းအလီကအတိုက်အခံအဖွဲ.ကိုလုံးဝပွတ်တိုက်ဖျက်စီးလိုက်တာဟာမဟာအမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်၊စနစ်တကျအတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီရှိနေခြင်း သည်အာဏာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံး(အချစ်ဆုံး)မိတ်ဆွေးဖြစ်တယ်၊ပါတီအတုတွေထူထောင်လို.ရတယ်၊တရားဝင်ပါတီတွေကိုအနှောင့်အယှ က်ပေးလို.ရတယ်၊သူတို.အချင်းအချင်းရန်တိုက်ကြအောင်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်လို.ရတယ်၊အဓိကကတော့၊သူတို.ရှိနေဖို.ပဲ၊သူတို.ရှိနေလို.ရှိရင် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကကြည့်လို.ကောင်းတာပေါ့ဗျား၊ခင်ဗျားဘက်ကိုသူတို.ဘယ်တော့မှမရပ်တည်ဘူးပြောလို.ရတာပေါ့ဗျား၊ဝေဖန်သမားတွေကလည်း ပြောလာမယ်၊အဲဒါကြောင့်၊မအောင်မြင်တာ၊သူတို.မှားတာစတာတွေပေါ့၊ အတိုက်အခံပါတီကိုကောင်းကောင်းမွန်းမွန်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်မည်ဆိုရင် ပြသူလူထု၏အတိဒုက္ခ၊ဒေါသတွေကိုသက်သာသွားအောင်နည်းလမ်းဖွင့်ထားသည့်သဘောပေါ့ဗျား၊(သန်းရွှေအာဏာရှင်နဲ.အန်အေလ်ဒီပါတီကဒီ အတိုင်သွားနေပြီးတကယ်စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီလိုလာသူများကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုအနှစ်(၁၀၀)အထိထောင်ချထားလို.ပေါ့ဗျား)၊တူးနီ ရှားတွင်ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တာကလွဲရင်ဒါကိုရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူး၊(ဒါကြောင့်၊အဏာရှင်ပြုတ်ပြီးအောင်မြင်တာပေါ့)
တူးနီရှားမှာမနက်မိုးလင်သတင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘင်းအလီကမျက်နှာဖုံးမှာအမြဲပါနေတယ်၊မီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကို၊သတင်းစာနဲ. ရေဒီယိုတွေကိုထိန်းချုပ်ပါ၊သို.သော်တစ်ဖက်မှာမူ၊လွတ်လပ်သည့်သတင်းဌာနအနည်းငယ်ကိုထားရှိရမယ်၊အဲဒါမှ၊အစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုသည့်သူ ပေါ်လာလို.ရှိရင်နှိပ်ကွပ်လို.ရတာပေါ့၊အဲဒီသတင်းတွေကလည်း၊ယုံကြည်စိတ်ချရလို.၇တာကိုး၊ပြည်သူတွေရဲ.ပေါက်ကွဲလုလုဖြစ်နေတာကိုအငွေ. ပေါက်တစ်ပေါက်ဖွင့်ပေးသည့်သဘောနဲ.ပေါ့၊ (သန်းရွှေကလည်းဒီအတိုင်ပဲလုပ်နေတာဟ၊)ဘင်းအလီကမလုပ်တတ်လို.ပြုတ်ကျတာပေါ့၊
စိတ်ဒေါသနဲ.ဘယ်တော့မှမစေ့စပ်နဲ. ဘင်းအလီ၏နောက်ဆုံးအချိန်နိုင်ငံတော်ရုပ်မြင်သံကြားနဲ.ရေဒီယိုတွေမှာမျက်နှာပြ၊မိန်.ခွန်းပြောကြားသည့်အခါတူးနီရှားပြည်သူတွေကသူ.မျက်နှာ တွေ.လိုက်တာနဲ.သူကနိဂုံးချုပ်ပြီးဆိုတာချက်ချင်းသိတယ်၊အကြောင်းကတော့၊သူမျက်နှာကစိတ်ဒေါနဲ.မောနဲ.ပြည့်နေလို.ပေါ့ဗျာ၊ သူကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမည့်သဘောထွက်မလာဘဲစစ်တပ်ကားသုံးမည့်မျက်နှာနဲ.ထွက်လာတာပါ၊(ဗိုလ်နေဝင်အာဏာရှင်နဲ.အတူတူပါပဲ၊)သန်းရွှေက လိမ်မာနေလို.၊
ဤနည်းကအာဏာရှင်အတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ဘင်းအလီ ကိုဖြုတ်ချရာမှာတူးနီရှားပြည်သူတွေကလွဲပြီးဘယ်သူကိုမှအပြစ်ပုံ ပြောလို.မရဘူး၊နောက်ကွယ်မှာအမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊နဲ.တစ်ခြားသောပြည်ပနိုင်ငံများရှိနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမတရားစွပ်စွဲလို.မရဘူး၊တကယ်တမ်းကျတော့၊အနော်နိုင်ငံများကဘင်းအလီ၏မဟာမိတ်ကောင်းတွေဘဲ၊အမေ၇ိကန်ကလည်းဘင်းအလီအထုပ်ထုပ်ပြီးထွက်ပြေးသည့်အချိန်အထိဘာမှ မပြောခဲ့ဘူး၊အာရပ်အာဏာရှင်အစိုး၇တွေကလည်းအစ္စလာမ်အစွန်းရောက်သမားတွေအပေါ်အပြစ်ပုံချပြောလို.မရဘူး၊ဘယ်အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါ
ဘာသာပြန်ကိုးကားချက်။ ဝီလီယံ ဂျေ ဒေါပ့်ဆင်။နိုင်ငံခြားပေါ်လစီမဂ္ဂဇင်မန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာဟောင်းနှင့် Newsweek International မှာအာရှဆိုင်ရာအထက်တန်သတင်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူကဒီမိုကရေစီစိန်ခေါ်ချက်များစာအုပ်ကိုရေးသားနေသူဖြစ်သည်၊ဤဆောင်ပါးကို ဝါရှင်တန်ပို. မှာရေးသားထားပါသည်၊http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/23/AR2011012300267_pf.html wjdobson2012@gmail.com William J. Dobson,aformer managing editor of Foreign Policy magazine and senior editor for Asia at Newsweek International, is writingabook about the challenges to democracy. Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:Like Loading...